लता मंगेशकरको पार्थिव शरीरमा शाहरुख खानले थुकेका हुन् ? यस्तो रहेछ वास्तविकता — Sanchar Kendra
लता मंगेशकरको पार्थिव शरीरमा शाहरुख खानले थुकेका हुन् ? यस्तो रहेछ वास्तविकता
लता मंगेशकरको अन्तिम संस्कारअघि मुम्बईको शिवाजी पार्कमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेबाहेक राजनीति र फिल्मका थुप्रै चर्चित अनुहार श्रद्धाञ्जली दिन पुगे । यीमधये एक थिए शाहरुख खान । तर उनका विषयमा ट्वीटरमा ठूलो विवाद निम्तिएको छ ।
बिजेपी हरियाणाका आइटी सेलका प्रभावी अरुण यादवले ट्वीटले यो विवादलाई निम्त्याएको थियो । उनले श्रद्धाञ्जलि दिँदै गरेका शाहरुख खानको भिडियो सेयर गर्दै लेखे, ‘के शाहरुख खानले थुकेका हुन् ?’
जफर सुरेशवालाले लेखेका छन्, ‘केही धर्मात्मा मानिस भारतको एकताको यो सुन्दर दृश्यलाई पचाउन सकिरहेका छैन । साँच्चै नै लता मंगेशकर ती व्यक्ति थिइन् जसले मानिसलाई जिउँदो हुँदा एकताको सूत्रमा बाँधिन् र मरेपछि पनि यस्तो गर्न जारी राखिन् ।
शाहरुख खान पनि यसैमध्ये एक हुन् ।’ फिल्म निर्माता अशोक पण्डिले पनि शाहरुख खानको आलोचना गर्नेलाई जवाफ फर्काए । राणा सफवीले लेखेका छन्, ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान । ’
कांग्रेसकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्रले पनि शाहरुख खानको पक्षमा ट्वीट गर्र्दै उनीमाथि प्रश्न उठाउनेहरुमाथि नै प्रश्न उठाइन् । रेडियो जकी सायमाले लेखेकी छिन्, ‘प्रार्थना गर्दा फुक्ने परम्परालाई थुक भन्नेहरुको सोच थुक्न लायक छ । यिनीहरु विष र घृणाको खेती गर्छन् ।’